Liverpool Oo Halis Ugu Jirta Inay Seegto Saxiixa Daafaca Reer England Ay Aadka U Dooneysay
HomeSuuqa kala iibsigaLiverpool oo halis ugu jirta inay seegto saxiixa daafaca reer England ay aadka u dooneysay
Daafaca dhexe ee Brighton & Hove Albion Ben White ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayaan kooxaha waa weyn ee Premier League Chelsea, Manchester United iyo Liverpool.
23 jirkaan ayaa door muhiim ah ka ciyaaray Leeds United intii lagu guda jiray hanashadoodii xilli ciyaareedka 2019-20, iyo White wuxuu si dhaqso leh isugu muujiyey inuu yahay xiddig ka ciyaara difaaca Brighton tan iyo markii uu kusoo laabtay kooxdiisa.
Inkasta oo natiijooyinka Seagulls aysan ka dhigi doonin aqrin wanaagsan, 23 jirkaan daafaca ka ciyaara ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda Graham Potter waxaana lagu xamanayay inuu u dhaqaaqayo Liverpool xilli hore iyadoo Jurgen Klopp uu u aqoonsaday inuu yahay difaac dhameystiran. Kana geesi ciyaari kara daafacyada Virgil van Dijk.
Wargeyska Sky Sports News ayaa sheegaya in kooxaha sida tooska ah ugu xifaaltama Premier League, Chelsea iyo Man Utd ay sidoo kale isha ku hayaan horumarka ninka reer England, iyadoo seddexda kooxood ay baahi weyn xidiga si ay ugu xoojiyaan daafacooda.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in Merseyside Reds ay ka fiirsan doonto inay la soo saxiixato daafac dhexe oo cusub suuqa kala iibsiga ee xilliga qaboobaha iyadoo la tixgelinayo dhaawacyada muddada dheer ee Virgil van Dijk iyo Joe Gomez, si kastaba ha noqotee, daafacayaasha difaacanaya Premier League ayaan wax xiiso ah u qabin heshiiska White.
Ciyaaryahankii hore ee Leeds amaahda ugu joogay wuxuu ku sugan yahay garoonka Amex illaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka 2023-24.